Ahoana ny fanavaozana ny LG G3 mankany Android 7.1.1 (maodely D855) | Androidsis
Raha omaly aho no nampianatra anao ny fomba fanavaozana ny LG G2 amin'ny Android 7.1.1 Nougat, anjaran'ny zokiny izao, ka amin'ity lesona vaovao ity dia hampianariko anao ny fomba manavao ny LG G3 amin'ny Android 7.1.1 Nougat.
Tutorial tsy manan-kery afa-tsy ho an'ny maodely iraisam-pirenena D855 ary aiza no hahitanao ny zava-drehetra ilainao hanohizana mankafy ny LG G3 anao, izany hoe, miaraka amin'ny fihenan'ny rafitra bebe kokoa ary manodina ny kinova Android farany indrindra hatreto. Manoro hevitra anao aho hijery ny horonantsary izay navelako teo ambonin'ireto tsipika ireto, horonan-tsary azonao idirana amin'ny fipihana fotsiny eto ambany izay misy azy "Tohizo ny famakiana…"; horonan-tsary izay hazavako tsikelikely ny fizotran'ny dingana arahinao ho fanampin'ny fampianarana anao tsara toy inona ny fijerin'ny Android Nougat amin'ny maodeliko LG G3 D855.
1 Fepetra takiana amin'ny kaonty mba hanavaozana ny Lg G3 amin'ny Android 7.1.1 Nougat
2 Ahoana ny famongorana ny maodely iraisam-pirenena LG G3
3 Ny fisie dia mila manavao ny LG G3 amin'ny Android 7.1.1 Nougat
4 Fomba fametrahana Rom LinageOS ho an'ny LG G3 international
Fepetra takiana amin'ny kaonty mba hanavaozana ny Lg G3 amin'ny Android 7.1.1 Nougat
Ny zavatra voalohany dia ny fananana a LG G3 maodely iraisam-pirenena miorim-paka ary miaraka amin'ny fanovana novaina dia nipoitraRaha tsy fantatrao ny fomba ahazoana an'io, izay miankina betsaka amin'ny kinova Android misy anao amin'izao fotoana izao, ireto misy rohy mankany amin'ireo lahatsoratra samihafa izay nataoko taloha izay asehoko anao tsikelikely ny fomba hahazoana Root ao amin'ny maodely LG G3 D855 araka ny kinova Android napetrakao:
Ahoana ny famongorana ny maodely iraisam-pirenena LG G3
Raha manana Android 6.0 Marshmallow ianao dia tsindrio eto.
Raha ao amin'ny kinova Android Lollipop ianao azonao atao ny manindry ity rohy ity.
Raha mbola eo amin'ny Android Kit Kat ianao tsy maintsy tsindrio ity rohy ity..
Rehefa nahazo Root ary apetraho amin'ny LG G3 ny fanarenana novaina Tokony hojerenao koa ireto manaraka ireto:
Manana ny TWRP Recovery dia nohavaozina amin'ny kinova farany araka ny asehoko anao amin'ilay horonan-tsary mifatotra
Manàna kopia backup an'ny folder EFS raha sanatria ka manidina.
Manana backup, nadroid backup ny rafitra fiasanay manontolo raha te-hiverina amin'ny fanjakana teo aloha isika alohan'ny Flasheode LinageOS 14.1
manana Nasaina ny debugging USB avy amin'ny Fikirakira ny Developer.
Asao ny batterie ho 100 x 100.
Ny fisie dia mila manavao ny LG G3 amin'ny Android 7.1.1 Nougat
Sintomy ny Radio na Modem 21C
Sintomy eto ny kinova farany an'ny TWRP.
Ampidino eto amin'ity rohy ity ny Rom LinageOS, Avelako ho anao ny iray amin'ny 29 Desambra satria ny Janoary dia mamela anao hametraka fotsiny raha manana terminal Android iray hafa eo am-pelatananao amin'ny alàlan'ny fanovana Google.
Sintomy avy amin'ity rohy ity ny Google Gapps, tsarovy ny misintona ny ARM + Android 7.1 ary aleo nano na micro
Izahay dia mandika ireo rakitra rehetra ireo amin'ny fahatsiarovana anatiny, ivelany na Pendrive handefasana amin'ny alàlan'ny OTG araky ny tombontsoantsika manokana voalohany indrindra dia manavao ny fanarenana amin'ny alàlan'ny Flashify izahay manao eo aloha raha maniry ny famerenanana ny fanarenana antsika ankehitriny isika.
Vantany vao nanavao ny TWRP Recovery amin'ny kinova 3.0.2, vonoinay tanteraka ny terminal ary averinay indray fa amin'ity indray mitoraka ity amin'ny maody fanarenana hanaraka ireto torolalana ireto amin'ny taratasy:
Fomba fametrahana Rom LinageOS ho an'ny LG G3 international
Hamafa dia hamafa ny zava-drehetra isika afa-tsy izay ananantsika ny fisie ilaina amin'ny fametrahana ny Rom. Izahay dia manao izany hatramin'ny in-dimy misesy.
Mandeha amin'ny safidy isika hametraka y mandrehitra ny onjam-peo 21C isika nefa tsy manao karazana Hamafana
Mandeha amin'ny safidy isika hametraka y Isika aloha dia misafidy ny zip an'ny Rom LinageOS ary avy eo misafidy ny zip an'ny Gapps.
Izahay dia mamindra ny bara etsy ambany hanatanterahana ny hetsika nangatahina ary miandry ny famaranana ny fizotran'ny Rom sy Google Gapps izahay, dingana izay tsy haharitra mihoatra ny dimy minitra.
Misafidy ny safidy an'ny Fafao Dalvik sy Cache afindrainay indray ny bara.
Farany afaka mifidy ny safidy an'ny Reboot System hankafizanao ny Android 7.1.1 Nougat amin'ny LG G3 D855.
Amin'ny fanarahana ireo dingana tsotra azonao atao manohiza mankafy ny maodely LG G3 D855 misy anao amin'ny Android 7.1.1 Nougat farany na firy na firy izy ireo na eo aza ny an'ny LG.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Rom » Ahoana ny fanavaozana ny LG G3 amin'ny Android 7.1.1 (modely D855)
Orlando Barbas dia hoy izy:
misaotra tamin'ny fandraisana anjara… mahasoa anao ve ny zava-drehetra?
Mamaly an'i Orlando Barbas
Bego dia hoy izy:
Misaotra betsaka! Namaka ny lg g3 nataoko tamin'ny android 6.0 aho noho ny iray amin'ireo fampianarana nataonao, ary nametraka Android 7 aho noho ity lesona ity. Manoro hevitra azy tanteraka aho.
Fa fisalasalana kely. Ankehitriny rehefa mametraka ao andoid 7 ny root checker dia milaza amiko fa tsy miorim-paka izy io. Ka ny fanontaniako dia:
- miaraka amin'ny android 7 dia esorina ny faka (izay noheveriko fa maharitra)
- sa nisy zavatra tsy nety nataoko? tena azo atao hahaha
Mamaly an'i Bego
Salama, fangatahana iray, nametraka azy aho, saingy tsy hitako ny safidiny eo ambony. toy ny MIRACAST sy SMART SHARE BEAM… Aiza no ahitako azy ireo? MISAOTRA
Luiggi dia hoy izy:
Valiny tamin'i Luiggi
Mampalahelo fa very ny fahafinaretana rehetra nahatonga anay ho tia ny LG
Rehefa mametraka ny fanavaozana dia mijanona ho toy ny telefaona hafa ny lg ...
ilander dia hoy izy:
Manana 2 g3 d855 aho rehefa te-hanavao azy ireo amin'ny marsmalow fa biriky izy ireo ary tsy afaka mamerina azy ireo aho raha afaka manampy ahy ianao dia tiako izany
Mamaly an'i ilander
Android 7.0 Nougat dia manomboka aparitaka amin'ny HTC 10, 10 Fiainana ary One M9 any Eropa